आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध – Online Bichar
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध
Online Bichar 20th April, 2020, Monday 10:03 AM
८ बैशाख २०७७ सोमबार
काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ। लकडाउनका कारण ५० हजार बालबालिका नियमित खोप सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। जन्मिएको १५ महिनामा १२ किसिमको खोप दिइन्छ।
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ – बाल स्वास्थ्य तथा खोप सेवा शाखा प्रमुख डा. झलक गौतमले नियमित खोप सेवा अवरुद्ध भए वा छुटाए कोरोना भन्दा पनि अन्य संक्रामक रोगका कारण बालबालिकाको ज्यान जाने खतरा रहने बताए।
एक महिनाको अवधिमा ४५ देखि ५० हजार बालबालिकालाई खोप लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। भाइरलजन्य रोगविरुद्ध लड्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि जन्मिएको १५ दिनभित्र बीसीजी खोप दिइन्छ। क्षयरोग, भ्यागुते रोग, लहरेखोकी, धनुष्टंकार, हेपाटाइटिस, हेमोफिलस, पोलियो, निमोनिया, जापानिज इन्सेफलाइटिस, दादुरा र रुबेलाको खोप जन्मेदेखि १५ महिनाभित्र लगाइसक्नुपर्ने उनले बताए।
डा। गौतमका अनुसार १५ महिनाभित्र ६ लाख २० हजार बालबालिकालाई खोप लगाउनु पर्छ। यसका लागि नवजात शिशुका अभिभावकले खोप केन्द्रमा ६ देखि ७ पटकसम्म ल्याउनु पर्छ।
यातायात सञ्चालन नहुँदा धेरै ठाउँमा भ्याक्सिन पठाउन नसकिएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। लकडाउनका कारण हिँडडुल गर्न रोक लगाइएको र भ्याक्सिन पनि पर्याप्त नभएको जनाउँदै खोप सेवा सञ्चालन अवरुद्ध हुन पुगेको हो।
खोप सेवा प्रभावित हुँदा बाल मृत्युदर जोखिम हुने विज्ञको भनाइ छ। नियमित खोप सुरु गर्ने निर्णय भए पनि विशेष खोपअन्तर्गत दादुरा र रुबेलाविरुद्धको खोप सेवा भने तत्कालै सञ्चालन नहुने डा. गौतमले बताए। लकडाउन खुलेपछि मात्र ती खोप सुरु गरिनेछ।
कोरोना भाइरस महामारी सम्बन्धमा सरकारले अन्तरिम निर्दे्शिका जारी गरे पनि स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्रवाह सुचारु गर्न सकेका छैनन्। निर्दे्शिकामा पनि कोरोना भाइरसको उपचार गर्ने अस्पतालबाहेक अन्य स्वास्थ्य संस्थाले नियमित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने उल्लेख छ।
अहिले प्रतिहजार जीवित जन्ममा र नवजात शिशु मृत्युदर २३ छ। त्यस्तै, शिशु मृत्युदर भने शिशु ३३ रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ।
सेवा सुचारु गर्न आग्रह
नियमित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध भएको गुनासो बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। विकास देवकोटाले शुक्रबारको प्रेस ब्रिफिङमा केही स्थानमा आधारभूत सेवा सुचारु नभएको जानकारी प्राप्त हुन आएकोे बताए।
नियमित खोप सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, नवजात शिशु उपचार सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, परिवारनियोजन सेवा, क्षयरोग, मलेरिया र एचआइभीविरुद्धको औषधि सेवन गर्ने सेवालगायत आधारभूत सेवा केही स्थानमा अवरुद्ध भएको गुनासोमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिए। हरेक स्थानीय तहमा रहेका अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत नियमित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न देवकोटाले अनुरोध गरे।
आवश्यक औषधि र औषधिजन्य उपकरण स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत व्यवस्था हुने डा।देवकोटाले बताए। स्वास्थ्य सेवा लिन भीडभाड नगर्न र आवश्यक दूरी कायम गर्न आग्रह गरे। ‘आगामी दिनमा सेवा पाउने सुनिश्चितता गर्न स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रालय सचेत छ। यसअनुसारको व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भने।
सेवा प्रवाहका लागि जनप्रतिनिधि, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलाई सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे। उनले भने, ‘यस खालको नियमित सेवा अवरुद्ध भयो भने यसबाट भविष्यमा अर्को नयाँ किसिमको प्रकोप आउन सक्ने स्थिति रहन्छ। यस किसिमको सेवा अवरुद्ध हुनु हुँदैन।’